विषयगत अध्यापन गर्न अनुमतिपत्र चाहिने :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक बन्न विषयगत अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। कक्षा ६ भन्दा माथि अध्यापन गर्ने शिक्षकले विषयगत रूपमा अनुमति लिनैपर्ने गरी आयोगले तयारी सुरु गरेको छ। यो खबर भवानीश्वर गौतमले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्। आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. तुलसीप्रसाद थपलियाले विज्ञहरूसँग छलफल गरी विषयगत लाइसेन्सको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवधारणापत्र पेस गरेका हुन्। शिक्षाक्षेत्रका विज्ञहरूले समेत विषयगत लाइसेन्स दिने कुरामा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। एकभन्दा बढी विषयमा लाइसेन्स लिन चाहनेलाई समेत उपलब्ध गराउन सक्ने गरी तयारी गरेको हो।
आयोगले शिक्षकलाई अहिलेसम्म तहगत मात्र लाइसेन्स दिने गरेको छ। आयोगका अनुसार तहगत रूपमा लाइसेन्स दिँदा विषयवस्तुमा राम्रो ज्ञान भएका शिक्षक कम आउने गरेका छन्। ‘शिक्षाको गुणस्तरीयताका लागि शिक्षकलाई विषयको किटान गरेर लाइसेन्स दिनुपर्ने अवस्था छ, निमाविदेखि माथि विषयगत रूपमा लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्नेमा लागेका छौँ,’ आयोगका प्रशासकीय प्रमुख थपलियाले भने। विषयगत लाइसेन्स दिने विषयमा छलफल सुरु भइसकेको र थप छलफल गरेर यस विषयमा आयोगले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ। लाइसेन्स दिँदा प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्नेसमेत व्यवस्था गर्न लागेको आयोगले जनाएको छ।
शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनबाट कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तहमा पुनर्संरचना गरिएको छ। प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत र ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तहमा विभाजन गरिएको छ। कक्षा ११ र १२ का लागि सरकारले केही शिक्षकको दरबन्दी र अनुदान दिने गरेको छ। कक्षा १ देखि ५ सम्म एउटै व्यक्तिले धेरै विषय पढाउन सके पनि त्योभन्दा माथिल्लो कक्षामा एउटै व्यक्तिले धेरै विषय पढाउन नसक्ने अवस्था छ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले विषयगत अध्यापन अनुमतिपत्र दिन सकेमा राम्रो हुने बताए। शिक्षकलाई मल्टिग्रेड स्पेसिफिक भएर पनि लाइसेन्स दिन सकिने उनको भनाइ छ। विषयगत लाइसेन्स दिँदा विषयवस्तुमा राम्रो ज्ञान भएको शिक्षक आउने उनले बताए। एउटा शिक्षकले दुई–तीनवटा विषयमा समेत लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेमा सम्भव हुने उनको भनाइ छ।
आयोगका अनुसार अहिलेसम्म साढे सात लाखले लाइसेन्स लिएका छन्। ०६१ देखि वितरण गर्न सुरु गरेकामा ०७४ सम्ममा सात लाख ६५ ले लाइसेन्स लिएका छन्। आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी निमावि तहका लागि अध्यापन अनुमतिपत्र वितरण भएको छ। प्रावि तहमा एक लाख ९८ हजार ८३०, निमावि तहमा तीन लाख ६५ हजार २७५ र माध्यमिक तहमा एक लाख ३५ हजार ९६० ले अध्यापन अनुमतिपत्र लिएका छन्। अहिले कक्षा १२ सम्म विद्यालय तहमा समायोजना भएकाले आयोगले कक्षा ११ र १२ लाई समेत अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिएको छ। आयोगका अनुसार ०७३ मा कक्षा ११ र १२ का लागि २२ हजार ९८६ लाई पाँच वर्षका लागि अस्थायी अनुमतिपत्र दिएको छ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, मंसिर १७, २०७४, ०५:०२:१८